ဖောင်းထနေတဲ့ပပ စောက်ဖုတ်ကြီး – Grab Love Story
by phyu May 20, 2021
အံသြစရာမြင်ကွင်းကြောင့်မျက်လုံးပြူးမိသည်။ အတွင်းမှာ ကိုအောင်ကျော်နှင့်အတူ မျိုးပပ ရှိနေပြီး မျိုးပပရဲ့ လက်ကောက်ဝတ်တွေကို ပူးကာ အောင်ကျော်က ကြိုးနဲ့ စိမ်ပြေနပြေ ချည်နေခြင်းကြောင့်ပင်။
ကျွန်အော်ဟစ်ဖို့ ကြံလိုက်ပေမဲ့ ထူးဆန်းနေသော မျိုးပပကြောင့်မအော်ဖြစ်။ လက်နှစ်ကို သူတပါးက ကြိုးတုပ်နေတာတောင် ပါးစပ်ကအားနေပေမဲ့ မျိုးပပအော်ဟစ်ခြင်းမရှိ။ ရုန်းကန်ခြင်းမရှိ။ ရဲစခန်းမှာ သွားရောက် အဖမ်းခံသော အပစ်သားလို လိုက်လိုက်လျောလျောရှိနေခြင်းပင်။
ကြိုးချည်ကြီးတော့ ပိုနေသော ကြိုးစအရှည်ကို ထုတ်တန်းပေါ်ပစ်လျိုပြီး တစ်ဖက်က ပြန်ကျလာသောကြိုးစေကစောင့်ဆွဲလရာ ပပတစ်ယောက် လက်မြှောက်လျက်သားဖြစ်သွားသည်။ အောင်ကျော်က မကျေနပ်သေး ထပ်ပြီး ဆွဲလိုက်ရာ ခြေဖျားထောက်အနေအထားဖြစ်သွားတော့မှ ကြိုးစကို အနီးက ခုတင်တိုင်မှာ ချည်လိုက်သည်။ ပပနှုတ်မှာ ကြိုးကို ဆွဲလိုက်ချိန်လက်တွေနာသွားသဖြင့် အ ဟုအော်ဟစ်ရုံမှအပ တခြားတုံ့ပြန်မှုမရှိ ။
မျိုးပပတစ်ယောက်လက်တွေမြှောက်ထားရတော့ ကျစ်လစ်သွယ်လျသောကိုယ်နေဟန်ထားက ပေါ်လွင်နေသည်။ အပေါ်ဝတ်ရင်ဖုံးလက်ရှည်လေးက အနည်းငယ်ပါးသဖြင့် အောက်ခံဘ်ာလီကိုပင်မြင်နေရသည်။ ခါးကို ကျစ်လစ်စွာစည်းနှောင်ထားသော အထက်ဆင်စကို အောင်ကျော်က ဖြုတ်ချလိုက်သဖြင့် လုံချည်လေး ပန်းနုခြေရင်းမှာပုံကျသွားသည်။ အောင်ကျော်က ပပရဲ့ ပင်တီကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ ကျောင်းမှာ အိနြေ္ဒရှိလှပါသည်ဆိုသော ပပ အောက်ပိုင်း အဝတ်ဗလာနှင့်ဖြစ်သွားသည်။
ကို အောင်ကျော်ရဲ့လက်တွေက အငြိမ်မနေ အဖုတ်လေးကို ပွတ်သပ်နှိုက်စွနေသည်။ ပပကတော့ခေါင်းလေးမော့ အံကို ကျိတ်ကာ ခံစားနေသည်။ ကြည့်နေရင်းပင် အောင်ကျော်က ပပရဲ့ အဲ့နေရာကို လက်ဖဝါးနဲ့ နှစ်ချက်လောက် ရိုက်လိုက်သည်။ ပပတော့ ဘယ်လိုမေသည်မသိ။ ဖောင်းကနဲအသံကြောင့် ကျွန်မပင်ရင်တွေတုန်မိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို တွန့်လိမ်နေသော ပပကို မြင်နေရသည်။
ကိုအောင်ကျော်က ပပကို ကျောပေးလိုက်ပြီး သူ့ရဲ့သံသေတ္တာလေးထဲက တစ်စုံတစ်ရာကို ထုတ်ယူလိုက်သည်။ ထောင်မှန်စတုဂံပုံ လေးထောင့်တုံးလေးတစ်ခု။ အဲ့အတုံးလေးမှာ ဝိုင်ယာနဲ့ ဆက်ထားတဲ့ ဘဲဥပုံစက်ကလေးတစ်ခုလဲပါသည်။ကိုအောင်ကျောက လေးထောင်းတုံးလေးက တစ်စုံတစ်ရာကို နှိပ်လိုက်ရာ ဘဲဥပုံ စက်ကလေးက တွီကနဲ အသံခပ်ပါးပါးနဲ့တုန်ခါနေသည်။ ထိုတုန်ခါနေသောစက်ကလေးကို ပပရဲ့ ရင်သားပေါ်တို့ထိကစားနေသည်။
ပပခမျာ မျက်နှာလေးရှုံမဲ့ရင်း တအအနဲ့ ညည်းညူရင်းခံစားနေရရှာသည်။ ထို့နောက်ကိုအောင်ကျော်က ထိုဘဲဥပုံစက်လေးကို ပပရဲ့အဖုတ်ထဲထိုးထည့်လိုက်သည်။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ပပဆီက ညည်းသံအကျယ်ကြီးထွက်လာသည်။ အောင်ကျော်က ချက်ခြင်းမတ်တပ်ထကာ ပပရဲ့ ပါးနုနုလေးကို ဖြောင်းကနဲ ရိုက်ချလိုက်သည်။
နင်အဲ့လောက်အသံကျယ်နေရင် ဟိုဘက်က ဟာမကြားသွားဦးမယ် နင့်ပါးစပ်ကို ပိတ်ထားရမယ်။
ကိုအောင်ကျော်က ပြောပြောဆိုဆို ကြမ်းပြင်ပေါ်က ပင်တီလေးကိုယူကာ ပပပါးစပ်ထဲထိုးထည့်သည်။ ကြည့်နေတဲ့ ကျွန်မဝေါ့ကနဲပင် ပျို့တတ်မိသည်။ သို့သော်မျက်နှာမလွှဲမိ။ အောင်ကျော်က တွဲလောင်းကျနေတဲ့ လေးထောင့်တုံးလေးကို ပပရဲ့ ဘယ်ဘက်ပေါင်မှာကပ်ကာ တိပ်နဲ့ ပါတ်ချည်ထားလိုက်တယ် ပြီးတော့ တုန်ခါမှုကို အမြင့်ဆုံးပြောင်းလိုက်ပုံရသည်။ စက်အသံကို အနည်းငယ်ကျွန်မကြားနေရသည်။ ပြီးတော့ ခြေရင်းက ပပရဲ့ထဘီကို ပြန်ဝတ်ပေးသည်။ ခြေကျင်းဝတ်တွေကိုလည်းပူးကာ ကြိုးချည်လိုက်သည်။
ပပကတော့တွဲလောင်းလေးနဲ့ တွန့်လိမ်နေသည် ကိုအောင်ကျော်ကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပင် အရက်ကလေးသောက်ရင်း အရသာခံကာ တစိမ့်စိမ့်ထိုင်ကြည့်နေသည်။ ပပတွန့်လိမ်နေရမှ ဝေဒနာကို မခံစားနိုင်လို့ထင်သည်။ လက်တွေကို ရုန်းကန်နေသည်ကို မြင်ရသည်။ ခြေဖျားထောက်အနေအထားဆိုတော့ ချိန်သီးလေးလို လှုပ်ရမ်းနေသည်။ သုမကိုကြည့်ရင်း ကျွန်မ အာခေါင်ထဲခြောက်ငပ်လာသလိုခံစားရသည်။ဝူးဝူးဝါးဝါး ညည်းသံတွေလည်းကြားနေရသည်။
ကျွန်မဒီနေရာကနေ ထွက်သွားသင့်ပြီးလို့ တွေးမိပေမဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို မလှုပ်ရှားမိ။ တွန့်လိမ်ရုန်းကန်နေသော ပပဆီကနေ မျက်လုံးအစုံကို မခွာနိုင်။ အနည်းငယ်အကြာမှာ ပပ ငြိမ်သက်သွားသည်။ ခံစားမှု အဆုံးအစွန်ကို ရောက်ကာ ခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားပုံရသည်။ ကိုအောင်ကျော်ထိုင်နေရာမှထကာ ပပကို ကြိုးဖြည်ပေးဖို့ပြင်သည်။ ကျွန်မလည်းတော်သင့်ပြီဟုတွေးကာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ပြန်ခဲ့တော့သည်။
မနက်ခင်းဟာ ပုံမှန်အတိုင်း လည်ပတ်နေသည်။ ခု ကျွန်မရှေ့က ပပဟာ ညက မျိုးပပမဟုတ်တော့သလို တည်ငြိမ်နေသည်။ ယူနီဖောင်း အဖြူ အစိမ်းနဲ့ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ် လှလှပပ အိနြေ္ဒရှင်မလေးပြန်ဖြစ်နေသည်။ ပုံမှန်အတိုင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မနက်စာကို စားသောက်လျှက်ရှိသည်။ ကျွန်မမှာသာ ညကပုံရိပ်တွေ မြင်ယောင်ရင်း ငိုင်နေမိသည်။
နှင်းဝေ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ နေမကောင်းဘူးလား…….။
ပပရဲ့မေးခွန်းကြောင့် ကျွန်မ ငိုင်နေမိရာ က အသက်ပြန်ဝင်လာတယ်။
ကျွန်မလဲ စားစရာရှိတာဆွဲပီး ဆွဲခင်စလေးဆွဲကာ ကျောင်းရှိရာသွားဖို့ပြင်ဆင်ရပါသည်။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်က ဒီရွာလေးမှတာဝန်ကျတဲ့ကျောင်းဆရာမတွေပါ။ ကျွန်မထက်စာရင် မျိုးပပက စီနေရာကျပါတယ်။ ကျွန်မက ဒီရွာရောက်တာ စာသင်နှစ် တစ်နှစ်စာသာရှိသေးသည်။ ကိုအောင်ကျော် က ဒီခြံထဲမှာ အိမ်စောင့်သဘောမျိုးနေတဲ့သူ။ အိမ်က သူတို့မိသားစုပိုင်အိမ်ပါပဲ။ ကျန်မိသားစုတွေက မြို့တတ်နေထိုင်ကြပေမဲ့ သူကတော့ သူ့အိမ်လေးထဲမှာ နေကျန်ခဲ့သည်။ ဘွဲ့ရ ပညာတတ် နိုင်ငံခြားသွားပြီး ပညာသင်ဖူးသည်ဟုသိရသည်။
ခြံထဲမှာ တံမြက်စဉ်းလှဲနေတဲ့ ကိုအောင်ကျော်ကိုတွေ့ရသည်။ သူကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပြုံးပြနှုတ်ဆက်သည်။ ကျွန်မမှာသာ မလုံမလဲနဲ့ ခေါင်းငုံထားမိသည်။ နောက်တော့နှစ်ယောက်သား ဆိုင်ကယ်လေးစီးကာ ကျောင်းကို သွားကြသည်။
တစ်နေ့လုံး ပပက ဘာမှ အမူအယာ ပျက်ယွင်းတာမျိုးမရှိ။ ပုံမှန်အတိုင်းပင်နေထိုင်သည်။ ကျွန်မလည်းမေးရင်ကောင်းမလားဟုတွေးနေပေမဲ့ ဘယ်က အစရှာရမယ်မသိဖြစ်နေသည်။ တစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပြီးတော့ နှစ်ယောက်သား ဗီဒီယိုကားကြည့်ကြသည်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ထိုရုပ်ရှင်မှာ မင်းသမီးကို ပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးသော အခန်းပါသည်။
ကျွန်မပါတ်ဝန်းကျင်ကို မေ့လျော့သွားအိသည်။ ကြိုးတုပ်ခံထားရသော ထိုမင်းသမီးရဲ့ပုံကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မ ညက ပပရဲ့ပုံတွေကို ပြန်မြင်လာသည်။ သူ့နေရာမှာ ငါဆိုရင်ကော ဘယ်လိုနေမလဲဟုတွေးကြည့်မိသည်။ ကိုယ့်လက်ကောက်ဝတ်လေးတွေကို စုပ်နယ်နေမိသည်။
ဟဲ့ နှင်းဝေ နင်ဘာဖြစ်နေတာတုန်း……။
မျိုးပပက ပုခုံးကို ပုတ်ပြီး ခေါ်လိုက်မှ တုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့သတိပြန်ဝင်လာသည်။ စိတ်တွေက လှုပ်ရှားနေစဲ။
နှင်းဝေ နင်ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ တစ်နေ့လုံး ငိုင်နေတယ် ငါ့ကို ပြောပါ၍ီး ဘာတွေဖြစ်နေလဲလို့…….။
ပပက ကျွန်မလက်ဖဝါးလေးကို စုပ်ကိုင်ကာမေးသည်။ ကျွန်မ ညက သူမကို မြက်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်သည်။ ကျွန်မစကားဆုံးတော့ ပပက သက်ပြင်းချသည်။
ပပ ဟိုလူကြီးကနင့်ကို ဘာလို့အနိုင်ကျင့်နေတာလဲ။ နင်ကကောဘာလို့ ငြိမ်ခံနေရတာလဲ။
ဟုတ်တယ်နှင်းဝေ………။ ငါ အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ အခါ၊ လွတ်မြောက်ဖို့အခွင့်အရေး အရှိအောင်ချုပ်နှောင်ခံရတဲ့အခါ ရတဲ့ ခံစားမှုကို ကြိုက်လို့…….။
ပပက ခေါင်းလေး ငုံပြီးဖြေတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မကို မေးတယ်။
ငါ့ကို အထင်သေးသွားပြီလား နှင်းဝေ…..။
ကျွန်မ အဆုံး ကျွန်မနဲ့သူမ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဖတ်ထားမိသည်။
နင့်ဆီမှာ ဘာလို့အဲ့လို စိတ်မျိုးရှိနေရတာလဲ……..ပပရယ်။
ကျွန်မ အမေးကြောင့်သူမက ဖတ်ထားရာမှခွာလိုက်ပြီး ငငါပြောပြမယ် ဟုဆိုသည်။
မျိုးပပတို့ မိသားဆုဟာ ကျိကျိတတ်မချမ်းသာကြပေမဲ့ အလယ်အလတ်တန်းစားထက်တော့ ပိုပြည့်စုံပါတယ်။ ပြီးတော့ မျိုးပပဟာ တစ်ဦးတည်းသော သမီး။ မိသားစုတွေရဲ့ အလိုလိုက်အကြိုက်စောင် ခြင်းကို ခံရတာပေါ့ အရာရာပြည့်စုံနေတဲ့ မျိုးပပတစ်ယောက် ပညာရေးတက္ကသိုလ်တတ်နေစဉ် အသက် ၁၉နှစ်အရွယ်မှာ ပဲထူးဆန်းတဲ့ အရာတွေစိတ်ထဲဝင်လာခဲ့တယ်။
Internet googleတို့ရဲ့ အကူ အညီနဲ့ သူမစိတ်တွေဟာ သီးခြားကမ္ဘာတစ်ခုကို ခြေချမိသွားတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတဲ့ စကားလုံးမရှိရာ၊ လွတ်မြောက်ခွင့်မရှိသော ချုပ်နှောင်ခြင်းများနဲ့ကမ္ဘာပေါ့။ ကိုယ်နောက်စိတ်မလိုက်တော့ စိတ်နောက်ကိုယ်လိုက်ရသည်။ ကိုယ့်အခန်းတံခါးကိုယ်ပိတ်ကာ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ကြိုးနဲ့တင်းကျပ်နေအောင်ချည်သည် ။ လက်တွေကိုတော့ ကိုယ့်ပါကိုယ်ချည်မရပေမဲ့ တင်းကျပ်နေသော အနေအထားရောက်သည်အထိ ရစ်ပတ်ကာ အကျဉ်းသူလေးလိုနေထိုင်ခဲ့ဘူးသည်။ သို့သော်စိတ်ရဲ့ အလိုစန္ဒများက ပြည့်ဝမှုမရှိ။
နောက်တော့ တာဝန်ကျရာရွာကလေးစီရောက်လာသည်။ ရောက်ပြီး သိပ်မကြာ သူမဘဝ ပြောင်းလဲမဲ့ဖြစိရပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ မှတ်မှတ်ရရ နှင်းဝေ မြို့တတ်ကာ လစာသွားထုတ်သည်။
သူမတစ်ယောက်ထဲ အိပ်ခန်းထဲတွင် self-bondageလုပ်နေသည်။ ထိုနေ့မှ ကိုအောင်ကျော် အုန်းထမင်းချက်သဖြင့်သူမတို့ကို လာပို့သည်။ အိမ်ရှေ့က အသံပေးသော်လည်း ဘယ်သူမပြန်မထူးသဖြင့် စိတ်ပူကာ အပေါ်ထပ်အိပ်ခန်းရှိရာ တတ်အလား ကြိုးများဖြင့် ရစ်ပါတ်လုံးထွေးနေသော သူမကို တွေ့သွားလေတော့သည်။
ပထမတော့ ညီမလိုခင်ရသော မျိုးပပကို စိတ်ပူသွားမိသည်။ထို့ကြောင့် အနားကို ကပ်သွားပြီး ကြိုးဖြေပေးဖို့လုပ်မှ လက်ကောက်ဝတ်မှကြိုးတွေက ချည်ထားတာမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ပါကို လိမ်ကျစ်ထားကြောင်း တွေ့သဖြင့်အခြေအနေကို ရိပ်စားမိသွားသည်။ ထို့ကြောင်သူ နေရာမှ လှည့်ထွက်သွားရာ ခြေထောက်မှကြိုး တွေကို အသည်းအသန် ဖြည်နေရာမှ ခေါင်းကိုမော့ကာ
စိတ်ချပါ အကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပါဘူး…….။ မင်းစိတ်ထဲ ဘာတွေရှိနေလဲ အကို သိပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ မင်းစိတ်ဖြေဖို့အကူ အညီ လိုမယ် ဆိုရင်တော့ ငါ့စီလာခဲ့ပါ။ ပြောပြီသူလှည့်ထွက်သွားသည်။
ထိုရက်မှစပြီး မျိုးပပနေရသည်မှာ သိပ်အဆင်မပြေ ကိုအောင်ကျော်ကိုလည်းရှောင်နေမိသည်။ ကိုယ့်စိတ်ကိုလည်း ဘယ်လိုမှ အာသာမဖြေနိုင်။ နောက်ဆုံးတော့ ကိုအောင်ကျော့်ဆီ သွားကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှားသလားမှန်သလားပင် ကျွန်မမတွေးနိုင်တော့ ။ ထိုနေ့က ည၉နာရီလောက်ကြီး ကိုအောင်ကျော်ရှိရာ အိမ်ကို ကူးခဲ့သည်။
ဖြည်းဖြည်းသာခေါက်သည်မို့ တံခါးခေါက်သံက တိုးညှင်းပေမဲ့ သူကြားပါလိမ့်မည်။ ဖြည်းငြင်းစွာ ပွင်လာသော တံခါးရဲ့ အသံဟာ အေးစက်တောင့်ခဲနေသည်။
ကျွန်မ ရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကြိုသိထားသလိုမျိုးသူက ရေရွတ်တယ်။ ပြီးတော့ သူကပြောတယ်။
မင်း ဒီအိမ်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ ငါ့လက်ထဲက အရုပ်ကလေးဖြစ်သွားပြီ။ မင်းရဲ့ သိက္ခာတရားတွေ မာနတွေ အားလုံးကို အိမ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာထားခဲ့။ အိမ်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ မင်းဟာ ငါပြုသမျှနုရမဲ့သူပဲ။ စဉ်းစားပါ သေချာပြီဆိုရင်တော့ ဝင်ခဲ့ ငါ့ အိပ်ခန်းထဲမှာရှိမယ်။
ပြောပြီး သူက လှည့်ထွက်သွားသည်။ ကျွန်မ လည်း လိုက်ဝင်သွားလိုက်တယ်။ ဒီအချိန်မှာ လှုပ်ခတ်နေတဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေ ပြေပျောက် ချင်တာကလွဲကင် ကျွန်မစိတ်ထဲ ဘာမှမသိပါဘူး။
အိပ်ခန်းလေးထဲမှာ သူနဲ့ ကျွန်မ နှစ်ယောက်တည်း။ သူက ခုတင်စောင်းမှာ ထိုင်လို့။ ကျွန်မက သူ့ရှေ့မှာ မတ်တပ်လေးရပ်လို့ပေါ့။
သူ့ရဲ့ခေါ်သံက တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ညအလယ်မှာ ပို ကျယ်တယ်ထင်ရသည်။ ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်လေးတုန်ကနဲဖြစ်သွားသည်။
ဟို သေတ္တာထဲမှာ ကြိုးတစ်ခွေရှိတယ် ယူလိုက်တဲ့… သူလက်ညိုးထိုးပြရာ သေတ္တာအဖုံးကို ဖွင့်လိုက်သည်။ အနီရောင်ကြိုးတစ်ခွေက ကျွန်မကို ကြိုဆိုနေသည်။ ကျွန်မကောက်ယူလိုက်သည်။ သိပ်မကြာခင် ဒီကြိုးတွေထဲ ကျွန်မ လက်တွေ လှုပ်မရအောင် ဖြစ်နေလိမ်မယ်ထင့်ရဲ့။
သူက ကျွန်မလက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကမ်းပေတဲ့ ကြိုးခွေကို ယူ ကာ နေရာမှထလာသည်။ ကျွန်မထက်ခေါင်းတစ်လုံးပို မြင့်တဲ့သူ့ကို ကျွန်မ မော့ကြည့်နေရသည်။ သူက စကားတစ်ခွန်းမှ မပြောပဲ ကျွန်မလက်တွေကို ကြိုးနဲ့ပူးချည်ပြီး ကျန်နေတဲ့ ကြိုးစကို ထုတ်တမ်းမှာ ချည်လိုက်တယ် ကျွန်မလက်တွေ မြှောက်လျက်သားပေါ့
ဟင့်အင်း ကျွန်မ တစ်ခါမှအရိုက်မခံဖူးဘူး အကို….။
သူက မျက်ခုံးကို ပင့်တင်ရင်းဆိုသည်။ ကျွန်မခေါင်းငြိမ့်ပြမိသည်။ လက်ကိုလည်းလွတ်လို လွတ်ငြားရုန်းနေမိသည်။ မလွတ်ေုမာက်နိုင်မှန်းသိတော့ အားငယ်လာသလိုလည်းခံစားရသည်။
အင်း မင်းဒီနေ့ဝဋ်လည်ပြီ………။ပထမဆုံး အနေနဲ့ မင်းကိုယ်ပေါ် အလျိုးရာတစ်ချို့တင်ပေးဖို့ စီစဉ်ထားတယ်။
သူကျွန်မကို ရိုက်တော့မှာပေါ့ ။ ကျွန်မစိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။
ဒါနဲ့ ကျောင်းဆရာ အများစုက ဘာလို့တင်ပါးကို ပဲရိုက်ကြလည်းသိလား။
ကျွန်မ ခေါင်းခါပြမိသည်။ တစ်ကယ်လည်း သိမှမသိပဲ။
အဲ့နေရာက အသားများပြီး ရိုက်လို့ကောင်းလို့လေ။ အထူးသဖြင့်မင်းလိုတင်ပါးမျိုးလေ။ ဟုဆိုကာ ကျွန်မတင်ပါးကို လက်နဲ့ ပုပ်သည်။ သာမန်အချိန်ဆို တစ်ခုခုတုံပြန်မိမှာ။ အခုက လက်တွေက ရှိသာရှိသည် သုံးမရတဲ့ အခြေအနေ။ သိမ်ငယ်မှုကိုခံစားရသည်။
သူက ခေါင်းအုံးအောက်ထည့်ထားတဲ့တစ်စုံတစ်ရာကို ယူကာ လေထဲဝှေ့ရမ်းလိုက်သည်။ ဝှစ်…ကနဲအသံကကျောချမ်းစရာ။ သေချာကြည့်တော့ ဝိုင်ယာကြိုးကို တိပ်နဲ့ ပတ်ကျစ်ထားသောကြိုးတစ်ချောင်း။
သူက ကျွန်မရဲ့ကျော ဘက်ကို နေရာယူသည်။ ဝှစ်ကနဲ့ သံကို ကြားလိုက်ရပြီး သုပစ်မှတ်ထားရာ ကျွန်မတင်ပါးတွေ ပူကနဲခံစားလိုက်ရသည်။ နာကျင်မှုကြောင့်ကိုယ်ကလေးရမ်းကာ ရုန်းကန်မိသည်။ သူကထက်မရိုက် ကျွန်မငြိမ်သွားသည်အထိစောင့်နေသည်။ ပြီးမှနောက်တစ်ချက်။
လက်က တိကျလွန်းငည်။ ရိုက်ချက်တိုင်းဟာ တင်ပါးကို သာထိခတ်သည်။ အော်ညည်းနေရသဖြင့် ကျွန်မလည်ချောင်းတွေလည်းနာကျင်နေသည်။ မှတ်မှတ်ရရ ထို ညက ကျွန်မ ဆယ်ချက်တိတိ အရိုက်ခံရသည်။ ကျွန်မအတွက်တော့ ကြီးမားတဲ့နာကျင်မှုပါပဲ သူကကြိုးဖြေပေးပြီး ပြန်တော့ဟုဆိုသည်။ မောပန်းစွာ ကျွန်မပြန်ခဲ့သည်။ နှင်းဝေကတော့ အိပ်စက်နေစဲ။ ကျွန်မကတော့ ပတ်လက်ပင်မအိပ်နိုင်။ ဘေးစောင်းအိပ်ခဲ့ရသည်။
ခပ်ဖြေးဖြေးတိုက်ခတ်နေတဲ့ ညနေခင်းရဲ့လေပြေမှာ သူမထဘီအနားစတွေ လှုပ်ခတိနေသည်။ ဟိုးအဝေးမဗာ ကောင်းကင်ပြာပြာ တိမ်စိုင်ဖြူဖြူတွေ ။နောက် သူမချစ်သော တောင်းတန်းပြာတွေ ။ ဘယ်လောက်ကြီးသော အပူကိုမစို ငြိမ်းသက်ပေးနိုင်သော သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ဟာ လက်ရှိသူမရင်က အပူကို မကြိမ်းအေးစေနိုင်ပါ။
ဟူးကနဲ ရှူထုတ်လိုက်တဲ့သက်ပျင်းမှာ စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တွေပါသွားရင်ကောင်းမယ်ဟု သူမတွေးမိသည်။ မျိုးမမပြောပြသော အကြောင်းအရာတွေက သူမစိတ်ကို စိုးမိုးထားနိုင်လွန်းသည်။
မကြာခင် မှောင်တော့မည်။ ပြန်သင့်ပြီဟုတွေးကသူမဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ ပြန်ခဲ့သည်။ ဆိုင်ကယ်လေးကိုခြံထဲရပ်လိုက်တော့ အမှိုက်တွေကို မီးရှို့နေတဲ့ ကိုအောင်ကျော့ ပြုံးကာနှုတ်ဆက်သည်။
နောက်ကျတယ်နော် မနှင်းဝေ ဘယ်တွေဝင်နေတာလဲ
သူမပြုံးရုံသာ ပြုံးပြမိသည်။ ကျော်ထွက်လာသော သူမကို ကိုအောင်ကျော် နားမလည်စွာကြည့်နေမှာသိသည်။ အိမ်ထဲရောက်တော့ မျိုးပပ ကသူမကို စိတ်မကောင်းဟန်နဲ့ကြည့်သည်။ နှင်းဝေခုံမှထိုင်တော့ သူမ ပုခုံးကို ကိုင်ကာ
ငါမပြောပြခဲ့ရင်ပေါင်းသား နှင်းဝေရယ်။ ငါ့စိတ္တဇထဲနင့်ပါ ဆွဲသွင်းမိသလိုဖြစ်သွားပြီ……..။
ငါ့မှာကို စိတ်အခံရှိတယ်ထင်ပါတယ် ပပရယ်။ ငါအခု ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိတော့ဘူး။
ပပသူမကို တွေတွေလေးစိုက်ကြည့်တယ်။ ပြီးမ သက်ပျင်းကိုချကာ…..။
နှင်းဝေ ငါနင့်ဘဝကို ငါ့လိုဖြစ်သွားအောင်စွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ နင်စမ်းသပ်ကြည့်မလား…..။
ငါလည်းရှိမှာပဲ နှင်းဝေရယ် နင်တစ်ယောက်ထဲမှမဟုတ်တာ။ ပြီးတော့ နင့်စိတ်နင်လည်းသိရတာပေါ့ သာမာန်စိတ်လှုပ်ရှားတာလား တစ်ကယ်ကို အဲ့စိတ်ရှိနေလားဆိုတာ…..။
ခဏစောင့်ဟု…..ဆိုကာ ပပ အပြင်ထွက်သွားသည်။ သိပ်မကြာပြန်ဝင်လာသည်။
နင်စမ်းကြည့်ချင်ရင် အဆင့်ပြင်ပြီးစောင့်နေပါတဲ့ ခဏနေရင်သူလာခဲ့မယ်တဲ့…..။ နင်မစမ်းချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ပြန်လာပြောပါတဲ့……. ဘယ်လိုလဲ နင့်သဘော။
အဆင်သင့်ပြင် ငါက ဘာတွေပြင်ရမှာလဲ…….။
ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး ငါယေလုပ်ပေးသမျှ အရုပ်ကလေးလို ငြိမ်နေရုံပဲ။
အရုပ်ကလေးလိုတဲ့ နှင်းဝေရင်မှာ လှိုက်ကနဲ……။ သူမပြုံးရုံလေးပြုံးကာ ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်သည်။ ပပကသူမကို ထူကာ ရေးချိုးစေသည်။ နောက်အဝတ်အစားသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဝတ်ကာ ဖြီးလိမ်းပေးသည်။ ဆံပင်ကိုလဲ ဆံထုံးလေးထံးပေးသည်။ သူမကိုယ်တိုင်လဲထိုသို့ပြင်ဆင်သည်။ နောက်နှစ်ယောက်သားဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်စောင့်နေကြသည်။
ည ၇ နာရီတိတိမှာ ကိုအောင်ကျော်ဝင်လာသည်။ နှင်းဝေကော ပပပါ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကြသည်။ ကိုအောင်ကျော်က အိမ်ရဲ့ တံခါးမကြီးကို အတွင်းမှလော့ချလိုက်သည်။
ရုတ်တရက်ခေါ်လိုက်တော့ သူမခန္ဓာကိုယ်လေးတုန်ကနဲဖစ်သည်အထိ လန့်သွားသည်။
မင်းအခုချိန်ကစပြီး ငါ့ရဲ့ ကျေးကျွန်ဖြစ်သွားပြီ နားလည်လား….။
သူမခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်သည်။ သူကအိတ်ထဲက ကြိုးတစ်ခွေကို ထုတ်ကာ ပပကို ပစ်ပေးလိုက်ပြီ သူ့ကို ချည်လိုက်ဟု အမိန့်ပေးသည်။
မျိုးပပ ကျွန်မနောက်လာရပ်သည်။ ဟူးကနဲသက်ပြင်းချသံကို ကြားလိုက်ရသည်။ နောက်သူမကကျွန်မလက်တွေကို ကျောဘက်သို့လိမ်ယူလိုက်သည်။
ကျွန်မရဲ့ အော်ညည်းသံကြောင့် ပပက ဆော်ရီးဟုတောင်းပန်သည်။
ပပ မင်းသူ့ကို တောင်းပန်စရာမလိုဘူး။ သူ့ကို နာအောင်လုပ် ကြိုးကို တင်းနေအောင်ချည် သူ့အော်သံကို ကြားချင်တယ်။
သူ့အသံက ဖြည်းဖြည်းအေးအေးနဲ့ မှန်မှန်ထွက်လာသည်။ ကျွန်မစိတ်ထဲ သေးငယ်သွားသလိုပင်။ ကျွန်မလက်ကောက်ဝတ်တွေ တင်းကျပ်စွာ ပူးကပ်သွားပြီ လက်မောင်းတွေ ရင်ဘတ်တွေမှာ တင်းကျပ်မှုကို ခံစားနေရသည်။ ကျွန်မ မလွတ်မြောက်နိုင်အောင်ချုပ်နှောင်ခံလိုက်ရပြီ။
တုပ်တုပ်မှမလှုပ်နိုင်တဲ့ ကျွန်မကို သူက အရသာခံကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့ ပပကို တစ်စုံတစ်ရာ ထပ်ပေးလိုက်တယ်။ခွေးလည်ပါတ်လေးတစ်ခု ကျွန်မလည်တိုင်ကျော့ကျော့ပေါ်ထပ်ရောက်လာသည်။ လည်ပါတ်ကသည် သံကြိုးငယ်လေးသူက ခုံပေါ်က ကိုင်ထားတယ်။ နောက်တစ်ချက်စောင့်စွဲလိုက်ရာ လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ခံထားရသူ ကျွန်မကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက်ကျသည်။နာကျင်မှု ဝမ်းနည်းမှုကြောင့်ကျွန်မ မျက်ရည်ဝဲလာသည်။
ပပ ကော်ဖီသုံးခွက်ဖျော်ပြီး အပေါ်လိုက်ခဲ့…….
အမိန့်ပေးပြီး ကျွန်မကို သံကြိုးက ဆွဲကာ အပေါ်တတ်သွားသည်။ ကျွန်မလည်းနောက်က ယိုင်တိယိုင်တိုင်လိုက်ရတာပေါ့။ အခန်းထဲက ကျွန်မနဲ့ ပပရဲ့ နှစ်ယောက်အိပ်ခုတင်စောင်းမှာ သူကထိုင်ပြီး ကျွန်မကတော့ သူ့ရှေ့က ကြမ်းပြင်မှာ ဒူးတုပ်ထိုင်ရသည်။
ခဏနေတော့ ပပတစ်ယောက် ကော်ဖီဗန်းလေးကိုင်ကာတတ်လာသည်။ ဗန်းလေးကို ကိုအောင်ကျော့်နဘေးမှာ တရိုတသေချကာ ကျွန်မဘေးမှာ ဒူးတုပ်ကာလာထိုင်သည်။ ကိုအောင်ကျောက ကော်ဖီခွက်တစ်ခုထဲဆေးတစ်လုံးထည့်ကာမွှေနေသည်။ ပြီးတော့ ပပကို ပေးကာ ကျွန်မကို တိုက်စေသည်။
ကော်ဖီတွေကုန်သွားတော့ ကျွန်မကို ကြိုးဖြည်ပေးသည်။ ပြီးတော့ အဝတ်တွေ တစ်ခုမကျန်ချွတ်စေသည်။ ကျွန်မရဲ့လက်ကလေးတွေနဲ့ ဖွံ့ထွားတဲ့ အင်္ဂါတွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့ကျွန်မကြိုးစားတယ်။ ဒါပေမဲ့သူက ကျွန်မကို ခုတင်ပေါ်ဆွဲတင်ကာ ပါတ်လက်လှန်စေပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးသို့ဆွဲကားကာ ခုတက်တိုင်တွေမှာ ကြိုးနဲ့ ချည်လိုက်သည်။ ခြေထောက်တွေလည်းထိုနည်း လည်ကောင်း………။ကျွန်မဟာ ခုတင်ပေါ်မှာ ခြေကားယားလက်ကားယားပေါ့။ လည်ပင်းက လည်ပါတ်ကိုတော့ ခဏဖြုတ်ပေးထားသည်။
ခဏကြာတော့ ကျွန်မစိတ်တွေ လှုပ်ရှားလာပြီး ကိုယ်အင်္ရာအစိတ်အပိုင်ူတေလကနေ ယားယံငေါ ဝေဒနာကို စတင်ခံစားလာရသည်။ ကျွန်မကို ကျွန်မ ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိ။ ဝေဒနာက ပိုပို ပြင်းလာသည်။ သူက ကျွန်မနားလျှောက်လာကာ
ဘယ်လိုလဲ နှင်းဝေ နေလို့မှကောင်းရဲ့လား…။ နင့်ကို ကာမစိတ်ကြွဆေးတွေ တိုက်ထားတာလေ……..။
ကျွန်မပြန်မဖြေနိုင် ရင်တစ်ခုလုံးမောဟိုက်နေသည်။ သူ့လက်တွေက ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်ကို ပွတ်သပ်နေပြီး နို့သီးခေါင်းလေးကို လက်ညိုးလက်မနဲ့ဖိညှစ်လိုက်သည်။
နာကျင်မှုကြောင့် ကျွန်မ ခေါင်းတစ်ခါခာနဲ့ အော်မိသည်။ ခံစားနေရသော ဝေဒနာ အနည်းငယ် သက်သာသလိုတော့ရှိသည်။
မင်းလိင်မဆက်ဆံရင် ဒါမှမဟုတ် အာသာမဖြေရင် တစ်ညလုံးရူးလောက်အောင် ခံစားရတော့မှာ…။ မင်းကို ဒီတိုင်းထားလိုက်ရမလား
မလုပ်ပါနဲ့ရှင် ကျွန်မကို အာသာဖြေခွင့်ပေးပါ…..။
ကျွန်မ အရူးတစ်ယောက်လို အော်ဟစ်တောင်းပန်မိသည်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မပါးစပ်ကို တိပ်နဲ့ကပ်လိုက်တညမို့ ဝူးဝူးနဲ့သာ အသံထွက်နိုင်သည်။ နောက်တော့ သူ့လက်စွဲတော် ကြာပွတ်လေးနဲ့ ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်အနှံကို ရိုက်နှက်ပါတော့သည်။ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်နေသော ရင်သားတွေသာမက တစ်ခါတစ်ခါ ပေါင်ကြားက အင်္ဂါနုနုလေးကို ပါလာထိသည်။ အရည်ကြည်လေးတွေစိမ့်ထွက်လာသည်။ နာကျင်မှုကြောင့် စိတ်တွေ ပြေလျော့သွားသလိုရှိပေမဲ့ ယားယံမှုက ရှိစဲပင် ။
နောက်တော့ ကို အောင်ကျော်က ပပကို လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ကာ သွား နင်သူငယ်ချင်းကို ပါးစပ်နဲ့ ပြုစုပေးလိုက်ဟု အမိန့်ပေးသည်။ ပပလည်း အမိန့်အတိုင်း ခုတင်ပေါ်တတ်လာတာပေါ့ ပထမဆုံး ကျွန်မရဲ့ ရင်သားတွေကို လျှာနဲ့ရပ်လိုက် စို့လိုက်လုပ်သည်။ နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ဆင်းသွားပြီး ပူစီလေးကို လျှာနဲ့ရပ်ပေးပါသည်။ တစ်ခါမှာ မကြုံဖူးတဲ့ ခံစားမှုကြောင့် အပျိုမလေးကျွန်မ မူးမူးမေ့မေ့ ။ နောက်တော့ တစ်ကိုယ်လုံးပျော့ခွေတဲ့အထိခံစားလိုက်ရသည်။
ပပကတော့ ကျွန်မကို ပြုစုပြီးတော့ ပို အောင်ကျော့်ရဲ့လိင်တံကို လည်း ပါးစပ်နဲ့ ပြီးသည်အထိစုပ်က ပြုစုရပြန်သည်။ နောက်တော့ဒီနေ့အတွက်တော်လောက်ပြီဟုဆိုကာ ကျွန်မတို့ကို ထားခဲ့ပြီး သူထွက်ခွာသွားသည်။ ပပလဲကျွန်မကို ကြိုးဖြည်ပေးပြီး နှစ်ဦးသားနွမ်းနယ်စွာ အိပ်ပျော်သွားကြသည်။
လက်ကောက်ဝတ်မှာ ထင်နေသော ကြိုးရာလေးကို ကြည့်ပြီး နှင်းဝေ အတွေးနယ်ချဲ့နေသည်။စနေနေ့မို့ ကျောင်းပိတ်သည်လေ…..
ဟဲ့ မယ်မင်းကြီးမ ဘာတွေတွေးနေတာတုန်း……။
အနောက်ကနေ ပခုံးပုတ်ပြီး ခေါ်တော့ နှင်းဝေ ဆက်ကနဲတုန်သွားသည်။
နောက်မှလန့် သွား……ရေသွားချိုး….. ကိုအောင်ကျော်က သူမြို့တတ်ရင်လိုက်ခဲ့တဲ့…….. ။
နှင်းဝေက ကြောက်လန်ဟန်နဲ့ ပခုံးတွန်ပြတော့ ပပကရယ်သည်။ နှင်းဝေလဲရေလဲထဘီလဲကာ ရေချိုးခန်းဝင်ခဲ့သည်။ ရေချိုးပြီး အခန်းပြန် မှန်တင်ခုံရှေ့အလှ ပြင်နေတုန်း ပပကနောက်နေသိုင်းဖက်သည်။
နင့်ကိုယ်လုံးလေး သိပ်လှတာပဲနှင်းဝေရယ် ငါညကမှသိတာ
ရှက်သွားသဖြင့် နှင်းဝေမျက်နှာလေး နီရဲသွားကာ ပပကို လက်နောက်ပြန် ဆွဲဆိတ်သည်။ ပပရယ် ရယ်ရင်းရှောင်လိုက်သည်။
နှင်းဝေရဲ့ အမေးကို ပပက ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ ဘာသံထင်လို့တုန်းလို့ပြန်ဖြေတယ်။
ပြောပြောဆိုဆို ပပက အဖြူရောင်ဂါဝင်လေးက ပေါင်းရင်းထိမတင်လိုက်သည်။ ပေါင်လယ်မှာ သူမရဲ့သွယ်စင်းတဲ့ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ချုပ်နှောင်ထားသော လက်ထိပ်ခေါ်မလား ခြေကျင်းခေါ်မလားအရာတစ်ခု။ ပေါင်မှာ ပတ်ထားသော ကွင်းကို သရေနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီး sizeက လိုသလို အတိုးအလျော့လုပ်နိုင်သည်။ အလွယ်တကူ ဖြုတ်မရရောင် သေ့ခလောက်လေးများနဲ့ခတ်ထားသည်။ အလယ်ကနေ မတိုလွန်းမရှည်လွန်းသော သံကြိုးလေးဖြင့်ဆက်ထားသည်။ လှုပ်ရှားမှုတွေကို လုပ်နိုင်ပေမဲ့ ခပ်မြန်မြန်သွားစရာရှိရင်တော့ ကျိန်းသေစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမဲ့ ပစ္စည်းတွေ……။
နင်က မနက်စောစော သွားခစားခဲ့တယ်ပေါ့…….။
ဟိုက ကြိမ်စင်္ကြနဲ့ ရိုက်ခေါ်တာကိုးဟ……။နင့်အတွက်လဲ လက်ဆောင်ပါသည်။
သူမခုံပေါ်တင်ထားတဲ့ အိတ်ကို ပပက လက်ညိုးထိုးပြရင်းဆိုသည်။သူမ ဘယ်လောက်မျက်စောင်းထိုးထိုး ပပကတော့ ရယ်ဖြဲဖဲပါပဲ။
လမ်းလျှောက်ရတာ ခြေလှမ်းမမှန်ချင်။ သူမရဲ့ အရှက်နဲ့ သိက္ခာ အားလုံး ကိုအောင်ကျော့်လက် အပ်ထားရသည် မဟုတ်လား။ လူပုံအလယ်မှာ တုန်ခါစက်တစ်ခု ပင်တီထဲထည့်ဝတ်ပြီး လမ်းလျှောက်ရလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးမိခဲ့ ။ ခုတော့ နှင်းဝေဆိုတဲ့ သူမ အပြင်ပန်းကြည့်ရင် ရင်ဖုံးအင်္ကျီချိတ်ထဘီနဲ့ အိနြေ္ဒရှင်ပေါ့။ ထဘီထဲမှာတော့ တုန်ခါစက်အစွမ်းကြောင့် စိုစိစိဖြစ်နေသော ပင်တီတစ်ထည်။
ဒီကြားထဲ မျက်နှာ မပျက်အောင် ထိန်းရသေးသည်။ နေက သူမအတွက်ပို ပူနေသည်ထင်ရသည်။ သူမအပေါ် ကြည့်နေသော မျက်လုံးတိုင်းကို ကြောက်မိနေသည်။ ကို အောင်ကျော်ကတော့ ဘေးမှာ လေလေးတစ်ချွန်ချွန်နှင့် ခလုတ်ကို ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်။
ဝယ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ကုန်ကားနဲ့ ရွာကို လမ်းကြုံတင်ပေးပြီးတော့ ကို အောင်ကျော်က သူမကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ တစ်နေရာခေါ်သွားသည်။ ခြံကျယ်ကြီးတစ်ခု……… ။ သူက အသင့်လူခေါ်ဘလ်ကို နှိပ်လိုက်တော့ ခြံစောင့်ဖြစ် ဟန် တူသူ တစ်ယောက်ထွက်လာသည်။ သော့ဖွင့်ပေးပြီး သော့ကို သူ့လက်အပ်ကာ ထွက်သွားသည်။ နှင်းဝေ တစ်ယောက် ယောင်လည်လည်နဲ့ အိမ်ထဲလိုက်ဝင်ခဲ့သည်။
အိမ်ဆောက်ထားတဲ့ ပုံက ရှေးဆန်ပြီး ခန်းနားလှသည်။ ဟောင်းနေပေမဲ့ ခိုင်ခံ့နေသေးသည်။
ကျွန်မကို ဘာလို့ ဒီကို ခေါ်လာတာလဲ
နှင်းဝေရဲ့ မအောင့်နိုင်အောင် မေးလိုက်တဲ့ အသံကြောင့် ကို အောင်ကျော်လှည့်ကြည့်သည်။ ထို့နောက် သူ့အိပ်ထဲက တစ်စုံတစ်ရာကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ နောက် ထို အနာကို စုပ်ကိုထားတဲ့ လက်သီးစုပ်လေးသူမရှိရာကို ကမ်းလိုက်သည်။ လက်တွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်လိုက်သည်။ လက်ဖဝါးပေါ်မှာ လက်စွပ်လေးတစ်ကွင်း……..။
မင်း တစ်သက်လုံး ငါ့အတွက် အသက်ရှင်ပေးနိုင်မလား နှင်းဝေ……..
အသံက နူးညံသည်။ အမိန့်သံမပါ။ သို့သော် သူမနားထဲ အမိန့်တစ်ခုလို ကြားသည်။ သူ သူမကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေတာပဲ။ လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ နှင်းဝေ ဘယ်တော့မှ ခေါင်းထဲမထည့်ရသေးတဲ့အရာ။ ရုတ်တရက်သူမ ဘာပြန်ပြောရမည်မသိ။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ပိုင်စိုးပိုင်နင်းပြောပုံကြောင့် အောင့်သက်သက်ခံစားရသည်။ မိန်းမက မိန်းမပဲလေ……။
ထိုနေ့က ထိုကိစ္စ ထိုမျှနှင့်ရပ်သွားသည်။ ကိုအောင်ကျော်က သူမကို အိမ်အနှံ့ ခြံအနှံ့လိုက်ပြသည်။ ကျောချမ်းစရာ…..။ လူတစ်ယောက်ကို ပုံစံမျိုးစုံနှင့် ချုပ်နှောင်နိုင်သော ကိရိယာများ လှောင်အိမ်များ ကြာပွတ်များ မျိုးစုံလွန်းသည်။ သူကပြောသေးသည်။ သူ့အချစ်ကို သာလက်ခံရင် သူမတစ်သက်လုံး ဒီအိမ်မှာနေရမှာတဲ့…….။
ညရောက်တော့ပပနဲ့ တိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ ပပက မျက်လုံးလေးပြူးပြီး အံသြလို့။ ပပနဲ့ ကို အောင်ကျော် ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက် ဘယ်တုန်းကမှ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရိပ်အယောင်မပြခဲ့ ဖူးဘူးတဲ့။ ဒီလိုဆိုတော့လည်း နှင်းဝေ ကြည်နူးရပါသည်။
ကျောင်းတွေပိတ်တဲ့ နွေရာသီ တစ်ခုမှာ သူမ ကို အောင်ကျော့်ကို အဖြေပေးခဲ့သည်။ နောက်ရွာမှာပဲ အကျဉ်းရုံး ပြုလုပ်ကာ ကို အောင်ကျော်ရဲ့ အိမ်ကလေးဆီလိုက်သွားခဲ့သည်။ အဲ့ဒီမှာ လှောင်အိမ်လေးတွေ လက်ထိပ်လေးတွေ သူမကိုစောင့်နေလိမ့်မည်။ ပပကတော့ သူမတို့နှစ်ဦးကို နှုတ်ဆက်က တာဝန်ကျရာ နောက်တစ်ရွာကို ကူးသွားသည်။ တစ်နေ့ သူမမှာလဲ စိတ်တူရာ လူတစ်ယောက်ရှိလာလိမ့်ဦးမည်။